Samsung Samsung M31s yaive yakavambwa kupera mwedzi wapfuura segore repakati zorodza kuna Galaxy M31. Kana iwe uchinge uchichengeta track, idzi dzinozorodza smartphone dzinoita kunge dzirikupinda nekuchinjika, zvichiratidza Samsung shungu yekuda kuchengeta yaro yepakati-line Lineup nyowani kuti itise chero makwikwi. Izvo pachazvo hazvishamisi chaicho- Samsung Galaxy M30 yakatambirwa zvakanaka munzvimbo yakazara vanhu, uye Mahara M30s kwazvo vakacheuka misoro nekukosha kwayo. Chinese smartphone OEMs senge Xiaomi uye Realme vanogara vachiudza hutongi hwavo muchikamu ichi, uye iyo M yeGlass M inoratidzika sokunge yakatyora kodhi kuti ichengetedze vakwikwidzi pazvigunwe zvavo. Iyo maGlass M31s inogona kuramba ichi chiitiko ichi? Tichaedza kutsvaga kuti chii chaizvo chakachinja neyeGlass M31s mune iyi ongororo yekukurumidza.
Samsung Galaxy M31s: Nhaurwa
Peak kupenya: 420 nits
25W kukurumidza charger inosanganiswa mubhokisi
Reverse wired charging (USB-C ku USB-C waya inosanganisirwa mubhokisi)
Fingerprint sensor Side-yakaiswa chigunwe chechipunwe sensor
Kutanga: 64MP, f / 1.8, Sony IMX682
Sekondari: 12MP Ultra-yakafara, 123 ° FoV
Chikoro chepamusoro: 5MP yakadzika sensor
Android Version Android 10 ine OneUI
Nezvekuongorora uku: Samsung Samsung M31s (8GB + 128GB) yakakweretwa kwatiri ne Samsung India. Ongororo iyi ndeye mushure memazuva manomwe ekushandiswa. Samsung yakanga isina chero yakapinda mune ino chinyorwa.
Samsung Galaxy M31s: Dhizaini, Vaka, uye Ratidza
Iyo Samsung Galaxy M31s inoratidza diki kukwidziridzwa mumutauro wekugadzira iyo Samsung yakashanda mune yayo M-Series lineup kusvika zvino. Nepo yepurasitiki yakakosha kutarisa uye kunzwa kweiyo kifaa inoramba iri yakangofanana neyavakatangira, yeGPS M31 inosarudza kupenya kwechivara kumashure iyo inopa mudziyo kuzivikanwa kwayo. Iyo Mirage Black unit iyo yatakatambira inotanga nesilver-chrome ruvara kuenda kumusoro uye inosanganiswa neruvara rwetema kusvika pasi. Iwo ruvara rwechrome rwuri nyore kudhonza pane kamera, uye iyo gradient yakawanda zvishoma nezvishoma pakati nepakati pane izvo zvinoshandiswa neyakagadzirirwa. Kumashure kune zvakare kupenya kwakaperera.
Iyo yepakati-chimiro, kumashure kwepasi, uye mabhatani pane mudziyo ari ese polycarbonate. Zviri pachena kuti Samsung inoshandisa polycarbonate kuburitsa mutengo wechigadzirwa, uye isu tiri zvakanyanya kugutsikana nesarudzo sekureba sekunge mari inenge ichipiswa kune vatengi. Uyezve, mafoni e polycarbonate anorema zvishoma, zvichireva kuti haunyatsocherechedza yakakura 6,000mAh bhatiri inorema ruoko rwako pasi.
Iyo Samsung Galaxy M31s pakutanga haina kunzwa isingadhuri, zvisinei, munguva yangu pfupi yekushandisa, ndakawana kuti foni yakanga yatotora zvidiki zvidimbu kumashure. Aya madiki-masvosve ari pamucheto wepadenga pamusoro wepashure (foni ine hint ye curve yakakomberedza kumucheto). Kana iyo runhare ichigona kuwana ichi chakareruka nyore nyore mukati mevhiki yekushandiswa, ini handina chivimbo mune kuti zvichafamba sei kwenguva yakareba. Ndakanga ndine zviitiko zvakafanana ne Kudza 20i iyo yaishandisa zvishandiso zvakafanana zvekuvaka, asi zvishandiso zvinotsigirwa negirazi hazvina kundipa dambudziko iri. Iyo inopenya inopedza inoitirawo iyo Galaxy M31s chigunwe chemagineti yemagineti. Kupfuurirazve, Samsung haibatanidzi chero nyaya kana kuvhara mubhokisi neiyo Galaxy M31s, saka ini ndingakurudzira zvikuru kutenga nyaya yakanaka yefoni.
Kumberi, iko kuratidzwa kunoona kusimudzira kushoma kubva padanho remvura kune rakadzika gomba-punch, iyo Samsung inoshambadzira saI infinity-O. Ini ndinoda chaizvo chinzvimbo ichi chemberi kamera kupokana negomba-punch makamera ayo akamiswa akananga kumakona. Iko kune zvishoma kukanganiswa nezvakakonzerwa nekuda kwechimiro ichi, uye gomba rekamera pacharo idiki zvakakwana kuti risakande software iyi yekunaka kunze kwechikamu.
Iko kumberi kweSamsung Samsung M31s inogarwawo neiyo 6.5 ″ FHD + Super AMOLED kuratidza, iyo yakanaka kwazvo. Chinhu chega kushungurudzika chandaive nacho kushomeka kwehuwandu hwekuzorodza-tinogona kuona mafoni akati wandei 90Hz uye kunyange 120Hz yekumutsiridza chikamu ichi chemutengo muIndia, saka Samsung inofanirwa kufunga nezvekusimudzira mudhipatimendi iri. Panyaya yekuonekwa uye humwe hunhu hunoratidzwa, ini ndiri kunyatsogutsikana nezvakapihwa Samsung Samsung M31s. Samsung's AMOLEDs ndeimwe akanakisa mumusika, uye iyo Galaxy M31s iri muchikepe chimwe chete.
Kana iwe ukanyatsotarisa, iwe uchaona kuti iyo Samsung Galaxy M31s haina kumashure yemunwe sensor, seya sensor yakaendeswa kune iyo iyo inopetwa kaviri sebhatani remagetsi. Samsung ingadai yakasarudza kuenda neine-in-kuratidza zvigunwe zvekunzwa, asi kumhanya nekuvimbika kwakanaka seyakajairika kumashure kweminwe sensor, saka ini handina zvichemo. Kuiswa kwacho kwakanakawo, asi vashandisi vane maoko madiki vanogona kukoshesa kuiswa pasi. Mabhatani ese zvakare tinya zvakanaka.
Pasi peGlass M31s inogara 3.5mm musoro wefoni jack, iyo USB Type-C doko, uye gomba remutauri. Nhare dzinoverengeka dziri muchikamu ichi dzakachengeta iyo 3.5mm musoro wefoni jack, uye zvakanaka kuti uone kuti Samsung ine, zvakare. Runhare haruna chero zvataurwa pamutemo pamvura kana guruva kuramba, izvo zvakare zvisiri zvisinganzwisisike kusiiwa pamutengo uyu.
Chitsuwa checamera kumashure chine bhuru zvishoma kwachiri. Inotaridzika kufanana neiyo iri paGirazi M31, asi kuiswa kwema sensors pamwe neye LED flash kwakasiyana. Iko zvakare hakuve nemucherechedzo unoonekwa pane chitsuwa chekamera, ichipa iyo Samsung Galaxy M31s inotaridzika yakachena kumashure.
Iyo Samsung Galaxy M31s inouya neExynos 9611 SoC inoshandisa 4 ARM Cortex-A73 cores yakavharwa kusvika ku2.3GHGHz uye 4 ARM Cortex-A53 cores yakavharwa kusvika ku1.7GHz. Kana kurongeka uku kuchinzwika sekukujaira, ndizvo nekuti Samsung yakatumidzira zvishandiso zvakati wandei neiseti imwechete, kusanganisira iyo Galaxy A50, Galaxy A51, Galaxy M30s, uye neGirazi M31. Izvo chete "zvinosimudzira" izvo Samsung zvakakwanira kubva kuGlobal M31 kusvika kuGlobal M31s inyaya yekuti iyo yekupedzisira inouya ne128GB yekuchengetedza seyakajairwa uye inowana sarudzo ye 8GB ye RAM.
Saka nekudaro, hazvina musoro kuti isu tiedze mabhenji maitiro eExynos 9611 muGreen M31s. Isu tinokurudzira kuverenga kuburikidza neyakareba Galaxy M30 kuongorora, semhedzisiro yekutanga mabhenji inoratidza kuti iwe uchawana zvakafanana kuita, kana zvisiri izvo.
Benchmarks parutivi, iyo Galaxy M31s inoita zvakanaka mumabasa ezuva nezuva, seimwe yaizotarisirwa kubva kune yepakati-renji chigadzirwa. Vazhinji vashandisi havazo cherechedze Samsung vachishandisa SoC ane gore, uye foni kazhinji haina nyaya dzinobata mabasa enguva dzose sekufambidzana munhau kubhurawuza, kushambadzira kweInternet, kana kuita zvemitambo. Ndakasangana nekunyura kwakawanda uye chimiro chinodonha pa Twitter app, asi izvo zviri zvakanyanya pa Twitter uye zvishoma pane Samsung. Chinhu chimwe chete chandakaziva, uye kuti Kishan anotaurawo mune yake yekukurumidza Galaxy M31, inyaya yekuti mimhanzi yakawanda pafoni inonzwa yakareba uye inononoka. Idzi animations dzinofanira kupera hafu yepiri kutanga kuita kuti foni inyatsonzwika uye ikurumidze kuita. Ini ndingakurudzira kuwedzera vanokurumidza kumhanya kumhanya kusvika ku0.5xx mune Sarudzo Dzesarudzo kuti ubvise iyi elasticity yekuda. Iyo processor inokwanisa kuramba ichikwira, saka ini handina chokwadi kuti nei maiyo maficha akareba kukweva.
Exynos 9611 yaive yakanaka paGreen M30s gore rakapfuura, kunyanya pawakatarisa mutengo wechigadzirwa uye musiyano wemutengo pakati peiyo neGlass A50s yakafanana SoC. Asi kubva ipapo, makwikwi akaenderera mberi kuenda mberi, asi Samsung yakaramba yakaiswa. Kupfuurirazve kusaenzanisa equation ndeyekuti Galaxy M inotevedzana yakaona kuwedzerwa kwemitengo nehafu yega-yegore yechizvarwa, saka kukosha kwakanaka iko hakusati kwakanaka. Saka kunyange iyo SoC pachayo ichishanda muzuva razvino revatambi-vashandisi-vashandisi, kukosha kwema chers uye spec-chasers hakugutsikane sezvo iwe uchigona kuita zviri nani kuita uye zvirinani mashongedzo mashitsi pamutengo wakadzika wematagi. Ikozve kunewo mubvunzo wekuzobatika-ramangwana: Ko iyo Exynos 9611 ichave yakashongedzerwa zvakanaka makore 2-3 pasi petsetse uchifunga nezve ino yepakati-sosi SoC yatove nezera gore? Ndicho chimwe chinhu chete nguva inogona kupindura.
Software - Imwe UI Core 2.1 yakavakirwa paApple 10
Iyo Samsung Galaxy M31s inomhanya paApple 10 ine Imwe UI Core 2.1 pamusoro, iri kukwidziridzwa sezvo yakafanogadzira inomhanya One UI Core 2.0. Imwe UI Core ndeye yakadururwa-pasi shanduro yeiyo yakakwana Imwe UI chiitiko iripo pane Samsung maforamu, uye Samsung inotumira iyi "Core" iyi bhajeti pane yayo bhajeti uye yepakati yepakati-yeyakagadzirwa. Iyo Core kusiyanisa inorasikirwa kunze kwezvinhu zvakaita se Samsung Kubhadhara uye Yakachengeteka Folder. Iwe zvakare unorasikirwa neye pane-system-yakakura-yakavakirwa mu-rekodhi rekodhi, asi yekushanda kune iyo ndeyokuwedzera iyo app yaunoda kutarisa rekodhi kune Samsung Game Launcher iyo inokutendera kuti utore rekodhi mumitambo.
Iyi ndiyo yangu yekutanga Samsung mudziyo mushure memakore anopfuura matanhatu, uye ndinoshamiswa kwazvo nekuziva kuti kudeedzera kwakaita Samsung software kuenzanisa neyakaipisisa iyo yeGingerbread-era Kubata. Kuenzaniswa neAOSP, Imwe UI Core ichiri kunzwa seyakajairwa ROM ine humhondi hwezvinhu, kubva paguruva reIye-On Display customizations, kumaficha emadziro kukiya yekuvhara, kudzora nhoroondo mapaneli eWi-Fi uye Bluetooth kutonga, kuti mamwe ekutsvaira mabhatani mabhatani. Iwe unogona zvakare kusarudza kuseta iyo-yekudzima-simba chirongwa chefoni (isina chokwadi nei, asi iwe unogona kana iwe wakamboda kudaro), uye uyezve kusarudza kuve nefoni ichizvipukuta pachezvayo kana iyo kodhi isina kuvhurwa yakaiswa zvisirizvo nguva gumi neshanu mune mutsara. Iwe unogona zvakare kuridza mhepfenyuro kubva kune imwe App pane imwe kifaa - zvinobudirira kukurega iwe kuridza mimhanzi kubva kune imwechete lokusebenza uchikurega uchitamba chimwe chinhu pafoni yako.
Pane zvakawanda zvakawandisa zvekuongorora pano mune software, asi kuzara kwezvinhu zvinopihwa neOne UI Core kungave kuri kunze kwekutarisa nekukurumidza. Kutsvaga mukati meaya marongero chiitiko chinononoka, zvisinei, saka kana iwe waida kuchinja mamwe marongero, iwe unorangarira zvakanaka panowanikwa nzvimbo
Game Launcher mune Imwe UI 2.1 Core inoita kuti iwe uwane vaunofarira maapurekodha uye kurekodha skrini uri mumutambo
Semunhu anoda mamwe maitiro ekusarudzika pane asina barebones ruzivo, Imwe UI Core chiitiko chakanaka. Vazhinji vashandisi, kunyanya muvateereri vayo, havafanire kuve nenyaya nenyaya dzese software. Kana iwe uine zvimwe zvinongedzo zve Samsung, iwe unobatsirwawo kubva pamusanganiswa wemutoo wakajeka uye chiitiko chakanyanya kusangana.
Chandinoda kutaura, zvisinei, ndeye bloat uye yakawandisa software monetization. Iyo iyo nguva yaunomisikidza foni yako, Imwe UI Core inoedza kunyepera kukumanikidza kuti usarudze zvese zvingasarudzwa zvekuwedzera uye maapplication.
Mune yekutanga skrini pamusoro, iwe unogona kuona kuti hapana nzira iri pachena yakaratidzirwa panguva yekuseta kubuda kweizvi. Asi kana iwe ukatarisa pahyplinks, iwe unoendeswa kune yechipiri peji kwaunogona, muchokwadi, deselect idzo sarudzo. Iyo Galaxy Apps Store, yakagadzirirwa Indus App Bazaar, zvino inopa rondedzero dzesarudzo dzisati dzasarudzwa dzekuodha. Kunyangwe kana uchinge wafunga kuita mapurogiramu aya, iwe uchiri kukwaziswa nemitambo yakaita saCandy Crush Saga, Solitaire infini, uye Musiyano Musiyano unoburitswa neiyo Galaxy Apps Store. Ini ndakasimbisazve nekuisa nyowani, uye hapana nzira chaiyo (yandaigona kuwana) yekusava neCandy Crush Saga yakadhindwa pafoni.
Yakawedzera smaky app spam. Cherekedza kuti maapplication anosarudzwa-sei kusarudzwa mukati mekuona kwakadonha. Kutsvaga kwainobva iyo mitambo yakatangwa isati yaratidza kunoratidza kuti iyo Gadziriso yeGlass ndiyo inokanganisa.
Uye isu hatisati tichiri kutaura pamusoro pekudzoreredza mapurogiramu ayo akakurumbira uye vashandisi vangangoshandisa - iwe unogona kuwana Amazon, Facebook, Snapchat, Netflix, Amazon Prime Vhidhiyo, Dailyhunt, uye Microsoft Office zvese zvinorongedzwa. Iyo Discover tab iri imwezve sosi ye "kuwana" maapp. Zvinoshamisa kuti imwe yemarongero akaiswa pane kuseta ndeyekuisa iyo isina kushandiswa programu kurara kwakadzika kwavanenge vasingakwanise kukutumira zviziviso. Iwe haungazonyatsoda chinhu ichi kana ukasazadza foni neasina mapurogiramu ipapo, asi uchingotaura.
Zvikumbiro zvinowanikwa pane nyowani yekuisa
Pane bhuroka yakawanda spam iri kuuya nenzira yako — iyo Samsung Max VPN app inotungamirwa pakarepo inoedza kuita mari nekutya zvinotyisa zviziviso. Kunyangwe iwe usinga bvumirani nemitemo uye mamiriro uye zvakavanzika mutemo weMy Galaxy app, iwe uchiri kuwana kakawanda ziviso dzenhau dzehau uye zvimwe zvirimo.
Ichokwadi, kuti iyo monetization inoedza uye yekuzivisa spam pane Imwe UI Core haina kurema pane pane chimwe chinhu senge MIUI, asi ichiripo uye inoda kuratidzwa.
Takabvunza Samsung India nezve software yekubatsira pane ino kifaa. Iyo Samsung Galaxy M31s ichagadziriswa kusvika kuApple 12 uye inowana kuchengetedzwa kwekuchengetedza kwemakore mana akazara (anogara kusvika anenge 4). Isu tinotarisira Samsung inonamatira kune ichi chipikirwa, sechipo chemakore mana yekuchengetedza chengetedzo haina kunyatsonzwika, muchikamu ichi. Samsung inobvumirawo kuti iyo bootloader yemushini ivhurwe zviri nyore, saka izvo zvinowedzerawo.
Iyo Samsung Galaxy M31s inonyanya kuchengetedza yakafanana kamera setup seyakatangira, asi nekushandura kwakakosha mashoma. Iyo yekutanga 64MP sensor ikozvino iri Sony IMX682, ichienzaniswa neiyo ISOCELL GW1 sensor paGirazi M31. Hatina kukwanisa kuwana ruzivo rwakawanda pane ino sensor nyowani kubva kuSony, kunze kwekusavapo [email inodzivirirwa] seGlobal M31s inogona kungonyora kusvika [email inodzivirirwa] Iyo yekupedzisira-wide-angle sensor inoona zvakare bump kumusoro mu MP kuverenga.
Nekuda kweCOVID-19 kuraira kwekufamba, mamiriro ekunze akaipisisa, uye zvisina mwenje mwenje, isu takanga tisina mikana yakawanda yekuyedza kamera. Nekuda kweizvozvo, kune chete nhamba shoma kwazvo yemamera kamera anowanikwa muFlickr gallery pazasi. Tichifunga kuti ichi chipenga chepakati sisitimu, isu tinotarisira kuona huwandu hwakafanana hunhu zvatinoona mune iyi huwandu: yakanaka yezuva kuita uye inobvumidzwa yakaderera-mwenje kuita.
Chinhu chinonakidza pane iyo Galaxy M31s 'kamera ndeye software inowedzera. Iwe ikozvino unotora Imwe Tora, chimiro icho chaive chikamu chemusoro wekutarisa zvinhu pane Galaxy S20 akateedzera uye yakaunzwa zviri pamutemo kuna Galaxy A51 uye Galaxy A71. Iyo itsva Imwe Tora kamera modhi inoita kuti vashandisi vatore kusvika gumi pamasekonzi etsoka ine huwandu hwakasiyana hwekutora modes, kusanganisira Live Focus, Smart Crop, vhidhiyo, uye AI firita. Kune vashandisi vane ruzivo nezvekamera uye vanoziva chaizvo zvavanoda kutora, chimiro ichi chinogona kunzwa kusakara.
Asi kune vashoma vane ruzivo vashandisi vasina chokwadi cheizvo zvavanonyatsoda kubaya kana vasangana nechinoitika, Imwe Tora zvinobuda kusimukira kune iyo smartphone. Iwe unowana akasiyana mafoto ane chekuita nemaune chiito-saka kana iwe usina chokwadi kana iyo nzvimbo iri pamberi pako ingaratidzika zvakanaka mumhanyi wenguva dzose, inosimudzwa, ichideredzwa, kana kunge boomerang; kana kuti yaizotaridzika zvakanaka kubva pane yekutanga kamera, kubva pane yakakura-angle, nefaipi, kana yakasimudzwa, Imwe Kutora inokutendera kuti utore vese pamwe chete uye uvachengetedze vese. Iwe unogona zvakare kushandisa Imwe Tora pamwe nechemberi kamera. Kugadziriswa kunotora masekondi mashoma, asi hapana chakakosha zvakakwana kuendesa vashandisi. Sezvo ichi chiri chisarudzo chechisarudzo, ini ndinogona kunyatsoona vashoma vekugadzira zvemukati vachikoshesa kuvepo kwayo. Nekudaro, software software yakaita seMutorwa Tora inogona zvakare kuvezwa pamusoro pevakatangira, asi munhu anogona kugara achipokana kuti chii chinokurudzira Samsung inofanirwa kuita saizvozvo.
Samsung Galaxy M31s: Bhatiri Hupenyu uye Kubhadharisa
Iyo Samsung Galaxy M31s 'chinhu chakanakisa bhatiri, mune yangu maonero. Iyo M30 yakatevedzana inozivikanwa nekupwanya mumabati makuru mune inokwanisa kurongeka tsoka, uye iyo Galaxy M31s inoenderera netsika ine beefy 6,000 mAh bhatiri. Sezvo nguva yangu yekudzokorora ipfupi kwazvo kuona hupenyu hwebhatiri mune dzangu dzekushandisa-zviitiko, ndakaisa iyo Galaxy M31s kuPMMark's bhatiri bvunzo kuti uone huwandu hwakaderera uye hwakawanda uwandu uye utipe huwandu hunofungidzirwa hwehupenyu hwebhatiri hunogona kutarisira vashandisi.
Iyi PCMark Battery bvunzo yakaitwa pane maviri akapatsana kumhanya. Iyo run yakamisikidzwa "Minimum Kupenya" ine foni yakaiswa kune yakaderera kuratidza kupenya kurongedza uye pane ndege ndege yeiyo nguva. Pakumhanya iyi, iyo Galaxy M31s inokanda padyo neanopping kwemaawa makumi maviri echipanera pa-nguva, zvichiratidza kuti foni yaive nekuratidzwa kwayo uye neCPU yayo yakashanda kwenguva yakareba iyi. Yechipiri inomhanyisa maxes kunze kupenya uye inoita kuti foni igare yakabatana neWi-Fi seyakajairwa, uye neGirazi M20s rakakwanisa kuwora kwemaawa gumi nemaviri pakumhanya uku. Iyi ndeimwe yenzira dzepedyo yekutevedzera yakamisirwa "real-world use" mamiriro ekupa huwandu hwehupenyu hwebhatiri, uye ruzivo rwako pachako rucharara mukati meaya maviri ekunyanyisa. Sezvo zvese zvakaperera zviri pamisoro yekumusoro, zviri nyore kugumisa kuti maGlass M31 ane imwe yehupenyu hwakanakisa yebhatiri pane anowanikwa-akawanda, eruzhinji smartphones.
Kwete chete iyo Samsung Galaxy M31s inogara kwenguva yakareba, asi zvakare inokurumidza kukurumidza nekuda kwehukuru hwebhatiri yayo. Iine iyo inosanganisira charger (iyo yatichazotaura nezvakawanda zvishoma), unogona kukomberedza 1% paminiti muawa yekutanga. Ramba uchifunga kuti bhatiri iri zvakare beefy, saka nepo zvikamu zvacho zvingave zvisingaite sekukwezva, unogona kuwana nyore nyore 50% bhatiri mumaminetsi makumi mashanu uye uve nefoni yekupedzisira iwe kuburikidza nezuva rakajairika. Sezvinotarisirwa, iyo yekuchaja kumhanya inodziya kana uchayambuka 50%, saka iwe unogona kutarisira kuti izere kuti inotora kwauri kweawa imwe nemaminetsi gumi nemashanu. Kuenzanisa, iyo Galaxy M80 yakatora maawa maviri nehafu kubhadharisa zvakakwana.
Samsung inowanawo hukuru hukuru hwekusanganisa yayo 25W Fast Charger (TA800) iri USB PD PPS 3.0 inowirirana [PDO: 2.77A pa9V); PPS: 3.0A (3.3-5.9V) kana 2.25A (3.3-11.0V)]. Iyi ndiyo chaja imwechete iyo Samsung yakarongedza mukati neyakawanda dzayo mureza, fanika Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra nezvenyaya iyoyo, uye kuona ichi charger chichiita mubhokisi reGirazi M31s ndeyekurapa zvachose. Samsung inosanganisirawo USB Type-C kune USB Type-C kabhokisi mubhokisi (seyi iri tambo inoshandiswa neTa800 charger), iyo inogona kushandiswa kudzosera zvakare mimwe michina yeType-C yemagetsi. Sezvo mamwe machisi akawanda anotanga ne USB Type-C, iyo USB Power Kuunza charger uye 1m yakareba C-kusvika-C tambo inofanirwa kuuya inobatsira zvikuru kunze kweiyi smartphone zvakare. Iyo mhedzisiro ndeyekuti iwe unowana inoshamisa inotevera-proof cable uye charger inosanganiswa mubhokisi. Basa rakanaka, Samsung.
Iyo Samsung Galaxy M31s foni yakanaka pane yayo pachayo, kunyange ichingori diki kusimudzira pamusoro peiyo yakatangira. Samsung yakatorova goridhe neGlass M30s, saka zvine musoro kuti vakanyanya kunamatira kune yakafanana formula. Iko kukwidziridzwa kwave kuri kudiki uye kuri munzvimbo shoma, nekudaro Samsung haina kutora njodzi dzisina kukodzera neGlass M31s. Kunyangwe icho chiri chinhu chakanaka kana kuti chakashata zvinoenderana nekuti ndeapi mafariro aunokoshesa zvakanyanya pane yako smartphone.
Iyo Samsung Galaxy M31s inozviratidzira yakanaka kwazvo kuratidza, inofadza chiitiko kamera uye software, uye yakanakisa bhatiri uye kuchaja kukwanisa. Pamutengo wekutanga we ₹ 19,499 weiyo 6GB + 128GB musiyano uye ₹ 21,499 yeiyo 8GB + 128GB musiyano, wakaderera musiyano unozviratidza seimwe sarudzo iri nani kune avo vari kutsvaga iyi yekubatanidzwa kwezvinhu.
Tenga iyo Samsung Galaxy M31s kubva kuAmazon.in
Asi kana iwe ukatanga kuchera mune iyo pepa pepa uye wotanga kutsvakira vakwikwidzi, iwe uchaona kuti mamwe mafoni akati wandei aripo anopa nani zvirinani kukosha. Semuenzaniso, iyo LITTLE X2 yakanakisa sarudzo yekuvaka iri nani, inokwikwidza zvikuru SoC, iyo 120Hz LCD iri zvakare yakanaka, Sony IMX686 yepakutanga kamera, uye yakanaka hupenyu hwebheti-uye zvese izvi pamutengo wakaderera we ₹ 18,499 kune yakafanana 6GB + 128GB dzakasiyana. Mutengo mumwe chetewo unowana iwe Redmi Cherekedza 9 Pro Max, nepo bhomba diki kusvika ₹ 18,999 rinogona kukuwana iwe Realme 6 Pro-Mimwe yedzimwe nzira dzemakwikwi.
Pamwe anokwikwidza akakura Samsung Samsung M31s ndiye Samsung Galaxy M31 pachayo. Parizvino kunyorera pa ₹ 17,499 paAmazon.in yemhando yakafanana, hausi kurasikirwa nezvakawanda (kunze kwekushaja, ini ndingapokana), kunyanya kana iwe ukafunga kuti zvese zvishandiso kubva ku Samsung zvinouya neiyo SoC. Iko kunaka kwehurongwa hweGreen M31 zvakare iri zano reSamsung-kana iyo yekutanga ichipa kukosha kwakanaka, saka mutserendende wave kutanga kudzikama. Isu tinotarisira kuti ino inguva yekupedzisira kuona iyo Exynos 9611 iri paM-Series, uye tinotarisira, Samsung opts yekukwikwidza zvakanyanya SoC yeGPS M32.
The post Samsung Galaxy M31s Ongororo: Kugadzirisa fomu yakabudirira yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Samsung Galaxy M31 inoongorora nekukurumidza: Anomutsiva akakodzera
Samsung Galaxy M31 Maoko-on: Kuwedzera Kunatsiridza pane yakakura Budget Smartphone